ASA FAMPANDROSOANA: Mila maharaka ny dian’ny Filoha ireo mambran’ny Governemanta – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:21
Ireo mandrafitra ny Governemanta ankehitriny.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/ASA FAMPANDROSOANA: Mila maharaka ny dian’ny Filoha ireo mambran’ny Governemanta
Tontosa afakomaly tetsy amin’ny efitrano fivoriana CCI Ivato ny fihaonana teo amin’ny Governemanta, notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, sy ireo Solombavambahoakan’I Madagasikara. Fotoana izay nahafahan’ireo depiote nitondra fitsikerana ny asan’ny Governemanta sy ny minisitra tsirairay avy. Araka ny fanamarihan’ireo depiote, tsy mitovy avokoa ny fomba fiasan’ny mambran’ny Governemanta. Ilàna fandrindrana izany, ary mila maharaka ny dian’ny Filoham-pirenena amin’ny asa fampandrosoana avokoa ny minisitra rehetra.
Lucien R. 17 décembre 2020
Saika voakasiky ny fanontanian’ireo depiote avokoa ny sehatra rehetra nandritra ny fihaonana teo amin’ny Governemanta sy ny Depiote, ny talata teo. Na izany aza, tsikaritra ho nihodina nanodidina ny lafiny tsy fandriampahalemana, ny fanamboaran-dalana sy ireo fotodrafitrasa ilain’ny vahoaka eny ifotony, ny fanontaniana. Voaresaka matetika nandritra ny fandraisam-pitenenana ihany koa ny olan’ny fahatapahan’ny herinaratra sy ny rano fisotro madio, ary ny lafiny fampianarana. Ankoatra ireo, nahazoan’ny Governemanta kiana ihany koa ny tolotra eo amin’ny lafiny fahasalamana, sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ary ny sehatry ny Fitsarana.
Misy amin’ireo sehatra voatanisa ireo amin’izao fotoana izao no efa ahitana taratra fandrosoana. Matoa anefa ny depiote mbola mitondra tatitra ny olana misy any amin’ny distrika misy azy avy, dia mbola misy ezaka tsy ampy izany ataon’ny departemanta minisiterialy voakasika ao. Tsy midika akory izany hoe ny fanaovan’ny depiote fanakianana sy tsikera no handrefesana ny fahombiazan’ny Governemanta na tsia. Fa misy kosa asa izay hiara-mahita ny tsy fahatomombanany ka hanairana ny tomponandraikitra voakasika izany mivantana. Ny Filohan’ny Repoblika sy ny Praiminisitra efa nametraka mazava tsara fa tsy tokony hisy intsony distrika adino amin’ny asa fampandrosoana. Tsy vitan’ny resaka fotsiny anefa izany fa mitaky ekipa mavitrika, ary miasa avy hatrany. Asa ahitam-bokany no ilaina fa tsy fihetsiketsehana fotsiny.
Ireo minisitra efatra notendrena farany.
Ny Filoha Andry Rajoelina rehefa miasa dia miasa aingana. Raha eo amin’ny fananganana fotodrafitrasa manokana, matetika ny Filohan’ny Repoblika no mifampiraharaha manokana amin’ny orinasa manao ny asa, mahakasika ny tokony hamitana izany farak’izay aingana indrindra tratra. “Maika ny fampandrosoana mila apetraka eto Madagasikara”, hoy ny filazan’ny Filoha matetika. Mila asa mivaingana ihany koa anefa ny vahoaka. Entina hilazana fa mila maharaka io hafainganam-pandehan’ny Filoha io ireo mambran’ny Governemanta tsirairay ireo, mba hahatanteraka aingana ireo Velirano sy asa fampandrosoana tiana hapetraka eto amintsika.
Raha niainga tamin’iny fihaonana teo amin’ny Governemanta sy ny Depiote iny fotsiny izao, dia tokony efa hisy fepetra raisin’ny departemanta minisiterialy voatonona matetika, amin’ny fanitsiana ny fomba fiasa amin’ny ankapobeny. Tsy azo lavina fa efa manakaiky izao ny fotoana hanaovana tombana indray ireo mambran’ny Governemanta tsirairay avy. Fotoana izay handraisan’ny Filohan’ny Repoblika fanapahan-kevitra mahakasika ireo minisitra mpiara-miasa aminy.
“Maro ireo fanovana napetraka” hoy ny Praiminisitra
Nandritra ny fandraisam-pitenenany, sady fandravony ireo fanontanian’ny depiote rehetra, nilaza ny Praiminisitra Ntsay Christian fa maro ireo fanovana napetraka tamin’ity taona ity, na teo aza ny ady natao tamin’ny Covid-19. Notsindriany tamin’izany ny fitohizan’ny fitakiana ireo Nosy malagasy, ny fanarenana ireo lalam-pirenena, ny fitsinjaram-pahefana. Izany hoe, na eo aza ny tsy fitoviana fomba fiasa eo amin’ireo samy mpikambana amin’ny Governemanta dia tsy azo hodian-tsy hita ny asa vitan’ny Governemanta amin’ny ankapobeny. Azo tsapain-tanana izany any amin’ny Faritra sy Distrika maro manerana ny Nosy. Antenaina ny mbola hitohizan’izany any amin’ny taona ho avy io, miaraka amin’ny tetibolam-panjakana izay vao nolanian’ny Antenimiera roa tonta.
TAONA 2021 : Inona no andrasan’ny vahoaka amin’ny mpitondra ?
Andrandraina ny fiakaran’ny tahan’ny fampidirana an-tsekoly amin’ny taona ho avy io.
Andro vitsy sisa dia hivalona tanteraka ity taona 2020 ity. Taona izay namela takaitra goavana teo amin’ny fiainan’ny mponina satria nomarihin’ny fandalovan’ny valanaretina Covid-19 teto amintsika. Asa goavana, noho izany, no miandry ny Fitondram-panjakana amin’ny taona 2021 ho avy io, satria io no taonan’ny fanarenana amin’ny lafiny rehetra izany. Isany andrasan’ny vahoaka voalohany ny fanarenana ny lafiny sosialy, sy izay miantraika mivantana amin’ny fiainan’ny mponina rehetra. Tsara ho fantatra fa niakatra 31,9% ny fandaniam-bola amin’ny sosialy ao amin’ilay tetibolam-panjakana 2021 nolanian’ny parlemantera iny, raha toa ka 27,5% izany tamin’ity taona ity. Momba ny fanabeazana, andrasan’ny vahoaka amin’ny taona ho avy io ny firosoana amin’ny fiantsorohana ny saram-pidiran’ireo mpianatra any amin’ ny Sekolim-panjakana fototra sy ny karaman’ ireo mpampianatra FRAM. Tsara ho fantatra fa anisany misongadina ao anatin’ny volavolan-dalàna mifehy ny fitantanambolam-panjakana 2021 koa finiavan’ny Fanjakana foibe hametraka politikam-pitsitsiana eto amin’ny tany sy ny firenena, amin’ny alalan’ny fampihenana 10% ny fampandehanan-draharaha eo anivon’ny minisitera rehetra. Tanjona ny hampiasana ny volam-panjakana amin’ny asa tena ilain’ny vahoaka mivantana. Efa finiavana lehibe nananan’ny Fanjakana rahateo ny fampiakarana ho 25 miliara Ariary ny vola fanampiana ny Kaominina mba hisian’ny asa eny ifotony.
Tsikaritra ao anatin’ny tetibolam-panjakana taona 2021 ny fanomezan-danja ireo vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana. Ny fampandrosoana isam-paritra rahateo no anisany andraindrain’ny vahoaka manomboka izao, ho fihazonana ny tenin’ny Filoha amin’ny hoe “tsy hisy distrika ho adino intsony”. Nisy, noho izany, ny fampitomboana ny fampiasambolam-panjakana amin’ireny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ireny. “Ireo tetibola enti-manorina fotodrafitrasa omena ireo Vondrombahoakam-paritra itsinjarampahefana araka izany dia hamafisina amin’ny alalan’ny Crédit d’investissement destiné à l’appui au développement (CIAD)”, araka ny voalaza ao amin’ny tatitry ny LFI 2021. Tsara marihana fa ny CLD teo aloha ihany no navadika ho CIAD, ary ireo Solombavambahoaka ihany no hitantana izany, ka hitentina 300 tapitrisa ka hatramin’ny 500 tapitrisa ariary izany, ho an’ireo distrika manana depiote roa.
Hitentina 5 495.5 miliara Ariary ny fampiasambolam-panjakana eny anivon’ny vondrombahoakam-baritra itsinjarampahefana amin’ny taona 2021, raha ny voalaza ao amin’ity volavolan-dalàna ity, raha toa kosa ka 5 195.2 miliara Ariary izany tamin’ny LFI 2020. Araka ny fanazavana, ny 2 035.8 miliara ariary amin’io vola ho ampiasain’ny Fanjakana io dia avy amin’ny loharanombola anatiny. Ary 3 459.7 miliara Ariary kosa no avy amin’ny loharanombola ivelany. “Ankoatry ny fanohizana ireo asa nekena atao nanomboka tao amin’ny LFR 2020 dia tetibola 421.0 miliara Ariary no omena ireo tetikasa vaovao sokajiana ho an’ny fisandratana”, araka ny fanazavana hatrany.
RAHARAHA VOLAMENA 73,5KG: Hiakatra fitsarana anio ireo telo lahy any Afrika Atsimo
FANENANA NY ISAN’NY LOHOLONA : Tsy hisy fiantraikany ratsy amin’ny fitsinjaram-pahefana